Akụkọ - Oge 129 nke Canton Fair mere ndokwa n'ịntanetị site na Eprel 15 ruo 24
China Import and Export Fair, nke a makwaara dị ka Canton Fair, guzobere na 1957. Onye na-ahụ maka ngalaba nke Azụmaahịa nke PRC na Ọchịchị Ndị Mmadụ nke Guangdong Province na nke China Foreign Trade Center haziri, a na-eme ya kwa oge opupu ihe ubi na ụbịa na Guangzhou, China.
Na 2020, megide ajọ ọrịa zuru oke nke coronavirus na nsogbu zuru ụwa ọnụ, Council Council kpebiri ijide Canton Fair na ntanetị. Nke a bụ mkpebi dị mkpa gọọmentị etiti na Council Council mere iji hazie mgbochi na njikwa ọrịa na akụ na ụba. na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị ngosi 26,000 ndị mba China na mba ofesi gosipụtara ngwaahịa na azụmaahịa dị ndụ ma duzie mkparịta ụka n'ịntanetị site na ịkwaa mma Canton Fair. Ndị ofesi mba ofesi sitere na mba na mpaghara 217 debara aha ma gaa leta Fair; mba zụtara mba ruru a ndekọ elu. Ihe ngosi Canton Fair ahụ mebere ụzọ ọhụrụ nke mmepe mba ụwa, wee tọọ ntọala siri ike maka mmepe njikọ na ntanetị n'ịntanetị.
Ma ugbu a, ọ bụ oge maka 129th China Import and Export Fair, na-ejide ntanetị site na Eprel 15th ruo 24th, 2020, Na ngụkọta ụbọchị 10 ngosi ngosi
Anyị, Taizhou Zhonghan Tools CO. LTD, naanị sepcialised na ọdịiche size nke rotary hama, gụnyere 20mm, 24mm, 26mm, 28mm, electric malite ịgba hama, 38mm rotary hama na demolition hama na 20mm, 26mm cordless malite ịgba hama, na anyị nwekwara atụmatụ imeghe ụlọ ọrụ rotors na-eme ụdị rotors anyị niile na ngwaahịa ndị ọzọ, yana n'ọdịnihu nwekwaa atụmatụ maka nhichapụ ma nyocha ngwaọrụ ndị ọzọ dị iche iche maka ama ama.
Iri abụọ mmeri n'ọdịnihu, Họrọ anyị Zhonon
Anyị na-eche gị mgbe niile ma anyị ga-anwa ike anyị niile ịkwado gị site na ogo dị mma na ezigbo ọrụ!
Site n'ụzọ, anyị ga-aga ụlọ ngosi ụlọ 26TH HARDWARE FAIR na yongkan na 9.26th-9.28th, 2021 na 35TH CHINA INTERNATIONAL HARDWARE FAIR na shanghai na 6.23-25th, 2021 na ngosipụta mba ụwa The International Building Materials Hardware Exhibition, Sao Paulo, Brazil, 2021 na EISENWARENMESSE FAIR, na Cologne, Germany, akụkọ ndị ọzọ biko jiri obiọma bịakwute anyị ọzọ